घटना क्षितिज: यो के हो, विशेषता र महत्त्व | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जब ब्ल्याक होलको पहिलो तस्बिरको बारेमा कुरा गरिरहन्छ, एक शब्द घटना क्षितिज। यो अन्तिम छाया हो गहिरो कालो भन्दा पहिले कि सबै प्रकाश निलग पार्न सक्षम हुन्छ ताकि यसलाई फेरि बाहिर नपर्न। धेरै मानिसहरूले यसको अर्थ के हो भनेर अचम्म मान्दछन्।
त्यसकारण हामी घटनाको क्षितिजको सबै विशेषताहरू, उत्पत्ति र महत्व बताउन हामी यस लेखलाई समर्पण गर्नेछौं।
1 घटना क्षितिज के हो?
2 कुनै फिर्तीको बिन्दु
3 घटना क्षितिजको सैद्धांतिक विवरण
4 कुल खोज
घटना क्षितिज के हो?
यो राम्रोसँग जोड दिइनुपर्दछ कि कालो प्वालहरू सबै चीजहरूलाई समात्न मद्दत गर्दछन् र स्पेस-टाइम आफैं भित्रै पस्न सक्छ। यो केवल प्रकाश पाउन सक्दैन, तर यो यस्तो गुरुत्वाकर्षणको साथ एक केन्द्र हो कि यसले हामीले उल्लेख गरेका सबै कुरालाई बढवा दिन सक्छ। आफैमा प्वालहरू तिनीहरू पूर्णतया कालो र कुनै पनि सुविधाहरू रहित छन्। अहिले सम्म तिनीहरू केवल आफू बस्ने वरपरका अथक प्रभावहरूका कारण घर हुन सकेको छैन। तिनीहरू पनि भारी ऊर्जाका लागि परिचित छन्।
यो कारण यो हो कि पहिलो पटक ब्ल्याक होललाई सम्पर्क गरिएको रेडियोस्कोप नेटवर्कको प्रयोगका लागि धन्यबाद हो। यी रेडियोस्कोपहरूले अन्तरिक्षबाट रेडिएसन नाप्न सक्छन्। यसले हामीलाई ब्रह्माण्डमा औंल्याउँदैन जसरी एक टेलीस्कोपले गर्दछ। विशेष गरी दुई ब्ल्याक होलहरू पत्ता लगाउन, फ्लोरोस्कोप प्रयोग गरिएको छ। ती मध्ये एउटा हाम्रो आकाशगंगाको मध्यभागमा सुपरमाइसेभ ब्ल्याक होल हो। अन्य आकाशगंगा M87 को कोर हो।
हालको कम्प्युटर प्रोग्रामलाई धन्यवाद, हामी रेडियो टेलिस्कोपले प्रदान गरेको डाटा छविहरूमा अनुवाद गर्न सक्छौं। यसको कारणले गर्दा ब्ल्याक होलको पहिलो तस्बिर बनेको थियो।
कुनै फिर्तीको बिन्दु
दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईं कालो प्वालमा केहि देख्न सक्नुहुन्न। हामी केवल ऊर्जाको ट्रेस देख्न सक्छौं जुन ग्यासले छोडेको छ जुन यसको वातावरणमा घुम्छ। ग्यासले भने यो एकदम तातो छ र धेरै विकिरण निकाल्छ। विकिरण सबै कालो प्वालको वरिपरि धूलो बादलहरूको बीचबाट जान सक्छ। देख्न सकिने छायाले कालो प्वालको नजिकको वातावरणमा कसरी ठाउँ-समय झुकाउँछ भनेर हामीलाई केही जानकारी दिन्छ।
यो सबै भाग पछि घटना क्षितिज हो। यो फेरि नोट गर्नुपर्दछ कि तपाईंले कुनै पनि बत्तीहरू वा कुनै रेखा देखाउन सक्नुहुन्न जुन औंल्याउन सकिन्छ। र यो यो घटना क्षितिज एक काल्पनिक सीमा हो। यदि हामी घटना क्षितिज पार गर्न सक्दछौं भने हामी कुनै प्रकारको परिवर्तन देख्दैनौं। यो किनभने यो कुनै प्राकृतिक सतह होईन, तर प्वालको प्वाइन्ट फिर्ता हुँदैन। यस विन्दुको अर्थ त्यो हो, त्यहाँबाट त्यहाँ एउटै मात्र सम्भावना छ: कि हामी उल्टो सम्भावना बिना प्वालमा खस्न सक्छौं।
गुरुत्वाकर्षणको ठूलो शक्ति जुन कालो प्वालले उनीहरू भित्र भएका सबै चीजलाई आकर्षित गर्दछ। यस्तो मात्रा र घनत्वको मात्रा यो हो कि तिनीहरूले ठूलो दबाव प्रयोग गर्छन्।
घटना क्षितिजको सैद्धांतिक विवरण
हामी घटनाको क्षितिजको विशेषता र सार कल्पना गर्न को लागी केहि अधिक सैद्धांतिक व्याख्या दिन जाँदैछौं। दिमागमा राख्नुहोस् कि कालो प्वालको घटना क्षितिज वस्तुको भाग्ने वेगसँग जोडिएको छ। यो गति बारे हो कि एक काल्पनिक व्यक्ति ब्ल्याक होलमा जान्छ। यो गति यसले ब्ल्याक होलको गुरुत्वाकर्षण तान्नु पर्छ। नजीकको कोही ब्ल्याक होलमा पुग्छ, उनीहरूको गुरुत्वाकर्षणको विशाल शक्तिबाट बच्न सक्षम हुनुपर्ने गति त्यति नै अधिक हुन्छ।
घटना क्षितिज ब्ल्याक होल वरपरको दहको हो भन्न सकिन्छ जहाँ भाग्ने वेग प्रकाशको गति भन्दा बढी छ। आज सम्म हामीले त्यस्तो कुनै चीज फेला पार्न सकेनौं जुन बत्तीको वेग भन्दा ठूलो छ। यो सापेक्षताको विशेष सिद्धान्तमा देखिन्छ आइंस्टीन। सिद्धान्तमा त्यहाँ छिटो यात्रा गर्न सक्ने केहि पनि छैन, यसको मतलब यो हो कि ब्ल्याक होलको घटना क्षितिज अनिवार्यतया बिन्दु हो जहाँ केही पनि हुँदैन र कोही फर्कन सक्दैन। नामले त्यो सीमा भित्र हुने कुनै पनि घटनाको साक्षीको असम्भवतालाई जनाउँछ, क्षितिज जुन पछाडि कसैले देख्न सक्दैन।
मानौं कि त्यहाँ काल्पनिक यात्री छ जुन घटना क्षितिज भन्दा बढी छ। यहाँबाट, सिद्धान्त वस्तुको सम्पूर्ण द्रव्य भन्छ यो असीमित घन विस्तार मा पतन भएको छ। यसको मतलव अन्तरिक्ष र समयको कपडालाई थाहा छ कि यसलाई पूर्ण रूपमा रेप गरिएको छ। र यो यो हो कि यो एउटा असीमित डिग्रीमा घुमाइएको छ। यस ब्ल्याक होल भित्र, घटना क्षितिज पछि, आइन्स्टाइनको सिद्धान्त अनुसार हामीले जानेको भौतिक विज्ञानको कानून अवस्थित छैन।
वैज्ञानिकहरूले केहि त्यस्तो फोटोग्राफ गर्न सके जुन सोचेको थिएन र अवस्थित छैन। भर्खर सम्म, ब्ल्याक होलहरू ब्रह्माण्डमा केहि नमूनाहरु लाई व्याख्या गर्न को सैद्धान्तिक बाहेक अरु केहि थिएन। यद्यपि हालको प्रविधिलाई धन्यवाद, हामीसँग ब्ल्याक होलको पहिलो फोटो हुन सक्छ।
यो तथ्य हो कि विज्ञानको विश्वको लागि यसको अर्थ एक ठूलो प्रगति हो। दिमागमा राख्नुहोस् कि ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित धेरै पाठ्यपुस्तकहरू पुनः लेख्नुपर्नेछ। हामीसँग विगतको सम्बन्धमा हालसालै रहेको सूचनाको ठूलो मात्राको अर्थ यो हो कि हामी लगातार अपडेट गरिरहनुपर्दछ।
हाम्रो ग्यालक्सी मा कालो प्वाल को लागी जे पनी पनी अवशोषण गर्न सक्षम हुन जानिन्छ। प्रकाश पनि घटना क्षितिजबाट फर्कन सक्दैन। यसमा पार गर्ने पक्कै सबै क्षितिजको रूप परिवर्तन हुन्छ जब यो अन्तरिक्ष-समयको साथ हुन्छ। यो चाखलाग्दो कुरा हो कि त्यहाँ ज्ञात ब्रह्माण्डमा एक ठाउँ छ जहाँ भौतिक विज्ञानको कानूनहरू यसलाई कार्यान्वयन हुन सक्दैन किनकि ती अवस्थित छैनन्।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं घटना क्षितिज र यसको विशेषताहरूको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » घटना क्षितिज